Sarimihetsika : Tsy manao politika fa miresaka politika ny « Gisa mainty » -
AccueilSongandinaSarimihetsika : Tsy manao politika fa miresaka politika ny « Gisa mainty »
Ankoatra ny maha-fialamboly azy, dia fitaovana iray entin’ny Scoop Digital sy ny birao mahaleotena miady amin’ny kolikoly amin’ny fanabezana ny olom-pirenena ihany koa ny sarimihetsika. Vokatra farany novokarin’io trano mpamokatra io ny « Gisa mainty » izay tsy manao politika nefa miresaka ny tontolo politika eto Madagasikara. « Misy ny hafatra entin’ny tantara ampitaina izay tokony hampieritreritra ny rehetra », araka ny fanamarihan-dRazafimandimby Mamitiana, Talen’ny Scoop Digital. Ankoatra ny lafiny politika, dia voatsindry manokana ao anatin’ny horonantsary ny ady amin’ny kolikoly, ary nitondra ny anjara birikiny sy naneho tan-tsoroka teo amin’ny lafiny ara-làlana sy ny fampitam-baovao ny Bianco. «Ao anatin’ny horonantsary dia misy ny doka fohy 30 segondra manentana ny vahoaka sy ny olom-panjakana hanohitra, hiady ary hamaky bantsilana ny kolikoly indrindra amin’ny sehatry ny fifidianana », hoy hatrany ny Talen’ny Scoop Digital.
Hivoaka an-kapila mangirana, amin’ny endrika DVD, ny alatsinainy 26 marsa izao ny « Gisa mainty 2018 », andiany voalohany izay efa nalefa tanaty efitrano tamin’ny taona lasa. Tsy miandry ela fa ny alatsinain’ny Paka izao no hivoaka anaty efitrano ny « Gisa mainty 2» ka hampiantrano izany ny tranon-tsinema vaovao Plaza. Tsy ho diso anjara koa anefa ireo toerana efa nahazatra dia ny Cinéma Ritz, Rex ary Roxy.
Anisan ‘ny fotoana hijiery todika ny zava bita ny faran ‘ny taona tahaka izao ary anisan ‘ny nanatanteraka izany ny filoham-pirenena, izay nitanisa ny asa vita nandritra ny 12 volana. Ny taona 2017 dia fotoana ...Tohiny